Maitiro Ekuti Uchenese HDMI Kunze kubva kuCanon EOS M100
Enderera mberi nekuvhara kwedu kweCOVID, kuve neakanaka odhiyo uye kumisikidza vhidhiyo kuhofisi yako yekumba rave danho rinonyanya kukosha kuti ubudirire mukushanda kubva kunharaunda dzekumba. Kana iwe uine DLSR kana Mirrorless kamera yakakomberedza iwe unogona kuishandisa sewebhu webcam yako izvi zvichavandudza yako vhidhiyo mhando zvakanyanya.
Nhasi tichatarisa maitiro ekushandura yako Canon EOS M100, inopinda Mirror isina kamera, mune webcam kuitira kuti iwe ugone kushandisa pane yako yemazuva ese zoom vhidhiyo yemusangano musangano. Tisati tatanga imwe kumashure kweiyi setup. Kana iwe uri pamusika kutenga brand nyowani Canon kana chero imwe nyowani DSLR kana isina girazi kamera sezvo yako huru webcam kamera ndiyo inogadzira yatove neyakagadziridzwa software suite uye iwe hauchadiwe kutevedzera ino gwara. Nekudaro, kana iwe ukaitika kuti une kamera senge izvo zvandinazvo uye iwe uchida kutora zvakazara mukana weiyo yakakura senji uye yakakwira ine simba renji yezvingaite girazi risingagone kuburitsa vs kamera yewebhu wozotevera pamwe chete.
Canon yakagadzira iyo EOS Webcam Inoshandiswa iyo inokutendera kuti ubatanidze yavo DSRL kana Mirrorless makamera sewebhu webcam kuburikidza neyakajairwa USB kubatana, zvisinei, chirongwa ichi chete chinogadzira kune nyowani modhi yeCanon kamera. Kana iwe uine chero chinhu kunze kweavo makamera akanyorwa pazasi saka wave kunze kwemhanza. (kunze kwekunge iwe uine ramangwana nyowani modhi iyo isati yaburitswa)
Canon EOS M100 (kana imwe kamera Canon inotsigira)
dummy bhatiri reCanon EOS M akateedzana (kuti usapedze muto mushure me1hr)
HDMI Vhidhiyo Capture Kadhi USB 2.0
Uku kuongorora kana iwe uchinge uchibatanidza kamera yakananga kukombuta sewebhu webcam.
Sezvauri kuona kana iwe uine zvese zvirevo zvakaputirwa kumeso kwako zvinoratidza uko iyo autofocus iri kutenderedza kumeso kwako panguva yevhidhiyo yekufona zvinhu zvinokurumidza kugumbura. Nekutenda pane zvishandiso kunze uko zvinoshandisa CHDK (Canon Hack Development Kit) kuti ugone kuwana yakachena HDMI kunze.
Maitiro Ekunyorera CHDK Hack pane Yako Canon M100
Chekutanga fomata yako SD Kadhi seFAT32, wobva watora chishandiso ichi chinonzi EOScard uye ita shuwa kuti SCRIPT inosarudzwa uye hapana chimwe chinhu. Sarudza iyo SD Kadhi uye shandisa script kuwedzera. Izvi zvinotaurira yako Canon EOS M100 kuti uite script panguva yebhootup, uye zvinyorwa zvaucharasa pano zvichavanza kufukidzwa kwese mukutarisa kwevhidhiyo.
Tevere kurodha pasi mafaera maviri atakugadzirira pazasi ndokuisa kumudzi weiyo SD Kadhi.
Canon M100 inowedzera.m
1 faira (s) 0.91 KB
1 faira (s) 0.02 KB
Iye zvino buritsa SD Kadhi uye riise muCanon M100 yako.
Kuti utaure kamera kurodha script, unofanirwa kutsvaga bhatani rekutarisa (ridza icon) pazasi peiyo vhiri, uye nekukurumidza uchirova kuratidzira kaviri, wobva warova bhatani reSET kaviri, wobva warova preview imwezve nguva.
Uine chero rombo rakanaka, iwe uchaona yakachena vhidhiyo kuburitsa uye chero dudziro kana vhidhiyo yakafukidzwa aenda. Iye zvino unogona kubatanidza iyo HDMI kune iyo USB vhidhiyo yekubata kadhi, izvi zvinoshandura yako HDMI chiratidzo sewebhu webcam. Kubva zvino kusvika zvino Windows iri kunetsekana kuti une webcam yakabatana nemuchina, ishandise sezvaunoona zvakakodzera.
The post Maitiro Ekuti Uchenese HDMI Kunze kubva kuCanon EOS M100 yakatanga kutanga Inotevera ya Windows.